ဤ ODYSSEY ဆောင်းပါးကကောလိပ်ကျောင်းသူမိန်းကလေးများအားသူတို့ကိုအထင်ကြီးရန်ကြိုးစားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ရန်တောင်းခံသည် - နှုန်းထားများ
ဤ Odyssey ဆောင်းပါးကကောလိပ်ကျောင်းသူမိန်းကလေးများအားသူတို့ကိုအထင်ကြီးရန်ကြိုးစားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ရန်တောင်းခံသည်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုနှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည့်ပညာရေးကိုရှာဖွေရန်အတွက်တက္ကသိုလ်တက်နေသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး လား။ ကောင်းပြီ, သင်အမှန်တကယ်စိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးထွက်လှည့်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောလိပ်ကိုသွား၏စစ်မှန်သောအချက်ကောင်းသောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လူတကိုရှာဖွေရန်! ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Odyssey Online ဆောင်းပါးတွင်ကောလိပ်ကျောင်းသားများပြုလုပ်သင့်သောအရာ ၁၀- ခုမှာကောလိပ်ယောက်ျားများတန်ဖိုးထားသင့်သည်။ သို့သော်မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏ဘဝရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုသည်လူတစ် ဦး ၏အတည်ပြုချက်ကိုရှာရန်သာဖြစ်သည်ဟုမထင်ပါနှင့်။ သူ့ကိုမိတ်ကပ်၊ လက်သည်း၊ ဖက်ရှင်အဝတ်အစားဖြင့်ခင်းထားသည်။ တစ်ကောလိပ်မိန်းကလေးရဲ့အရှိဆုံးလေးစားဖွယ်အရည်အသွေးတွေအချို့ကိုကြည့်ကြပါစို့။
ပထမ ဦး စွာအဘယျသို့သောဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ကောလိပ်ကျောင်းသူမိန်းကလေးများသည်အလှပြင်ဆိုင်၌အခြားရက်သတ္တပတ်တိုင်းလက်သည်းများကိုပြုပြင်ကြလိမ့်မည်နည်း။ ၎င်းသည်မိန်းကလေးများသည်အသုံးစရိတ်များစာရင်းတွင် mani pedis များကို ဦး စားပေးလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုရုံသာမကမိန်းကလေးအများစုသည်ထိုကဲ့သို့သောအသေးအဖွဲအလှအပအတွက်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၈၀ ခန့်သုံးစွဲရန်တတ်နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သေချာတာပေါ့, စာရေးသူကစျေးပေါမဟုတ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပေမယ့်နေဆဲမိန်းကလေးများအားလုံးသူတို့နှစ်သက်သောအဖြစ်သုံးစွဲဖို့ဖြုန်းတီးသောပိုက်ဆံရှိသည်ဟုထပ်ယူဆ, သူတို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်သို့ညှစ်ကြောင်းဆဲဆိုပါတယ်။ ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကဒီမလိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ယူနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအားလုံးဟာအမြဲတမ်းမပြုပြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတစ်နည်းနည်းနဲ့ရှင်သန်နေပေမယ့်ကျွန်မရဲ့ပန်းချီကားများမထိုးရသေးသောလက်သည်းအတွက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကကျွန်မကိုဘယ်တော့မှမကင်ပါ။
မိန်းကလေးတစ် ဦး အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအရှိဆုံးသောကောလိပ်ဘဝ၏ရှုထောင့်များအနက်မှ။ အဝတ်လျှော်ရန်လုပ်ခြင်း၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဟန်ချက်ညီစေရန်၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်များရှာခြင်း၊ ဤဆောင်းပါးအရ၎င်းသည်ထိုအရာများမဟုတ်ဘဲဆံပင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်အမျိုးသမီးများကို၎င်းတို့၏ဆံပင်သည်ဘဝ၏အဓိကပြconcernနာဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုခြင်းအားဖြင့်သာမက၊ ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုဂရုစိုက်သည်ဟုယူဆခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုပုံစံပြုထားသည်။ ဘယ်အချိန်မှာကတည်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးတစ် ဦး ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အရေးအပါဆုံးအသွင်အပြင်ခဲ့သလဲ ဤသို့ကျားမအခန်းကဏ္ of အပေါ်ကျဉ်းမြောင်းသောသဘောထားကအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးကိုသေတ္တာများထဲတွင်နေရာချသည်။
ကျန်ဆောင်းပါးတွင်ချောမောလှပသောမိတ်ကပ်၊ ကြည်လင်သောအသားအရေ၊ ချည်မျှင် - မျက်ခုံးများနှင့်အဖြူရောင်သွားများရှိသည်။ အားကစားခန်းမတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်တူညီသောနှစ်ထပ်တူညီသောအဝတ်အစားနှစ်ကြိမ်ဝတ်ဆင်ခြင်းအတွက်ကောလိပ်ကျောင်းသူမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုလည်းချီးမွမ်းသင့်သည်။ စာရင်း၏ဤအပိုငျး misogyny နှင့်အတူ teems:
နောက်တဖန်ငွေ, အပေါ်ယံနှင့် sexism နှင့်အတူ။ frat ပါတီများကိုမသွားဘူး, ယောက်ျားလေးများမကြိုက်ဘူး, instagram ရှိသည်မဟုတ်, နှင့်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ် $ 100 ကိုမတ်မတ်တတ်နိုင်ရန်ငွေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူအပေါင်းတို့သည်ကောလိပ်မိန်းကလေးများကော?
သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်, ငါရေးသားသူအမျိုးသမီးတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့ကြိုးစားနေသည်ဟုထင်ကြဘူး, သူကပြောပါတယ်သောအခါ, ငါကသူ့မျက်ခုံးချည်ထားဖို့သွားကြဖို့မည်သည့်ယောက်ျားတစ်ယောက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့အလှတရားနာကျင်မှုမဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုပြောပြရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိန်းကလေးများအနေဖြင့်ခေါင်းမှခြေချောင်းအထိဖယောင်းတိုင်များဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ဆိုးရွားသည့် Bs များကဲ့သို့နာကျင်မှုကိုခံကြရသည်။ သို့သော်ဝမ်းနည်းစရာမှာသူမအနေဖြင့်အမျိုးသားအလှအပစံနှုန်းများကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုလျှော့ချကြောင်းမထင်ရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြူရောင်ဖြူလူဖြူများသည်တတ်နိုင်သမျှအဖြူနှင့်ယောက်ျားလေးများအားလုံးရှာဖွေနေသည့်အပြည့်အစုံအပြုံးရှိသည်။ တစ် ဦး ကအမှန်တကယ်အာဏာပေးဆောင်းပါးသူမ၏အံသွားများ၏အဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲအမျိုးသမီးများ၏ပြည်တွင်းရေးအစွမ်းသတ္တိ, ဇာတ်ကောင်များနှင့်ထောက်လှမ်းရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီးထောက်လှမ်းရေးကိုဖော်ပြရန်စာရင်းတွင်နံပါတ် ၈ အထိအဘယ်ကြောင့်ယူရသနည်း၊ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်သူမ၏အလှအပနှင့်အညီဖြစ်နေသနည်း။
သင် be ဟုတ်ကဲ့။ နောက်ဆုံးတွင်အချို့သောသိသိသာသာအမျိုးသမီးအရည်အသွေးများကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်သတိပေးချက်မှာ၎င်းသည်အမျိုးသားများကိုဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးစာသင်တုန်းကကောလိပ်မှာတက်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါဟာမျှတမှုကိုခက်ခဲပြီးတန်ဖိုးထားလေးမြတ်တတ်သူမည်သူမဆိုကိုလည်းနားလည်ပါတယ်။ သို့သော်ကောလိပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုလိုချင်သည့်အရာပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်မှုပြုရန်သင်ယူခြင်းနှင့်ယောက်ျားများကကျွန်ုပ်တို့အားအလိုရှိစေလိုသောအရာအပေါ်အခြေမခံခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤ Odyssey ဆောင်းပါးအပေါ်သို့ကျရောက်ခဲ့သည့်ကောလိပ်ကျောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကအပေါ်ယံစရိုက်များ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့်ယောက်ျားများ၏ထင်မြင်ချက်များသည်သင်၏ကောလိပ်အတွေ့အကြုံကိုမဖော်ပြကြောင်းသတိရပါ။ သင် ... လုပ်သည်။